အကောင်းဆုံး Binary Options ပွဲစားများ - [86 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် 2022% WIN နှုန်း] - ကုန်သွယ်မှု2ခု လေ့လာပါ
အကောင်းဆုံး Binary Options ပွဲစားများ - ပြည့်ပြည့် ၀၀ ၂၀၀၀ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း!
options trading နှင့် ဆင်တူသော သဘောသဘာဝတွင်၊ binary options များသည် သင့်အား ကဲ့သို့သော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ချင့်ချိန်နိုင်စေပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်း, ရှေ နှင့် ဆီ အရင်းခံကိရိယာကို သင်မပိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း - သမားရိုးကျ ရွေးချယ်မှုများ စာချုပ်များနှင့် မတူဘဲ binary options များသည် ရလဒ်နှစ်ခုသာ ပေးဆောင်သည်။
binary option များသည်သတ်မှတ်ထားသောပေးချေမှုတစ်ခုနှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသောအခါသို့မဟုတ်သင်သင်၏ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားသောအခါသင်ငွေကုန်သွားနိုင်သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့် binary options သည်လောင်းကစားနှင့်နီးစပ်ရာအွန်လိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနေရာတွင်ရနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ သင့်ပိုက်ဆံနှင့်မခွဲမီ binary options များအကြောင်း လေ့လာရန်များစွာရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းကျကျလမ်းညွှန်ချက်ကို သေချာဖတ်ပါ။ ဤအထူးသဖြင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကိရိယာများ မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံ၏ အဝင်အထွက်များကို ရှင်းပြခြင်းအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး binary options ပွဲစားများကို စူးစမ်းလေ့လာပါသည်။
မှတ်စု: binary options trading နှင့်ဆက်စပ်နေသော အရင်းခံအန္တရာယ်များကို အခိုင်အမာဆုပ်ကိုင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမှန်မှာ၊ သင်သည် သမားရိုးကျ ရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် ဆန်းပြားသော ငွေကြေးကိရိယာများကို ပိုမိုစွန့်စားသည့်ပုံစံဖြင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုလိုပါက သင်သည် ရိုးရာရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် လောင်းကြေးထပ်ခြင်းကိုပင် ဖြန့်ကြက်နိုင်သည်။.
Binary Options ကိုဘာတွေလဲ?
၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့်၊ binary options သည်သင့်အားဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာ၏အနာဂတ် ဦး တည်ချက်အတွက်ငွေရှာနိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောအလွန်မှန်းဆနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ နာမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရလဒ်များသည်ဒွိနှစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်သတ်မှတ်ထားသောအမြတ်အစွန်းပမာဏကိုရရှိမည် (သို့) သင်၏ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရည်မှန်းချက်မှာသက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းသည်ရွေးစရာပွဲစားမှပေးသော 'strike price' ထက်နိမ့်သည်ဖြစ်စေ၊
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားသည်မနက်ဖြန်နံနက် ၁၀ နာရီကုန်ဆုံးမည့် Apple စတော့ရှယ်ယာများတွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ တန်သောင်းကျန်းသောစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်ဆိုပါစို့။ အကယ်၍ သင်က Apple ကိုညည်းညူသည်ဟုခံစားရလျှင်၊ သင်သည်ရှည်လျားစွာသွားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်မနက်ဖြန်ကုန်သွားလျှင်၎င်းသည်ရှယ်ယာစျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထက်ပိုများလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်သတ်မှတ်ထားသောအမြတ်အစွန်းကိုသင်ရရှိမည် - သင်၏ရှယ်ယာ ၈၀% ကိုပြောပါ။ မနက် ၁၀ နာရီမှာ Apple ရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုဒေါ်လာ ၂၀၀ ထက်နိမ့်ကျရင်မင်းရဲ့ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
အစုရှယ်ယာနှင့်သင်၏အလားအလာရှိသောအမြတ်အစွန်းများသည်ပြောင်းလဲနိုင်သောအရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဒီ၏ရှေ့တန်းမှမှာပိုင်ဆိုင်မှု၏လက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်။ သပိတ်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ Apple ၏ရှယ်ယာများကိုဒေါ်လာ ၁၉၉ ဖြင့်ယနေ့စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပါက၎င်းသည်မနက်ဖြန်တွင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည့်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သို့သော်သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၂၁၀ သို့တိုးမြှင့်ခဲ့ပါကဖြစ်ပျက်မှု၏အနိမ့်အမြင့်မှာနိမ့်ကျနေသဖြင့်အမြတ်ငွေမြင့်မားမည်ဟုသင်မျှော်လင့်သင့်သည်။
အစုရှယ်ယာနှင့်အမြတ်အချိုးသည် binary options contract ၏အရှည်အားဖြင့်လည်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စက္ကန့် ၆၀ မျှဖြစ်ပြီးရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ သဘာဝကျကျ, စာချုပ်ကြာကြာ, သင်ပိုက်ဆံအတွက်တက်အဆုံးသတ်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းပို။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီသင့်ရဲ့အလားအလာပြန်လာအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုလိမ့်မယ်။
binary option များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရောင်းမည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ online space တွင်တက်ကြွသောပွဲစားများရှိသည်။ ထိုအရာများဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားရန်သင်သေချာစွာလိုအပ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်၏ရန်ပုံငွေသည်အမြဲတမ်းလုံခြုံနေလိမ့်မည်။
Binary Options ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
အစာစားချင်စိတ် မြင့်မားသူများနှင့် သင့်တော်ပါသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုကို မပိုင်ဆိုင်ဘဲ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများကို ရောင်းဝယ်ခြင်း။
ပိုင်ဆိုင်မှုသည် စျေးနှုန်းတိုးမည် သို့မဟုတ် လျော့မည်ဟု သင်ထင်သည်ဖြစ်စေ ရွေးချယ်ပါ။
Binary options ပွဲစားများမှရွေးချယ်ရန်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်အဆင့်များကိုပေးဆောင်သည်။
အချို့သော ပလပ်ဖောင်းများသည် သက်တမ်းမကုန်မီ သင်၏ binary options များကို ကုန်သွယ်မှုမှ ထွက်ခွင့်ပြုသည်။
နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြင့် ငွေသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်းများ။
အမြတ်အစွန်းများသည် ယူကေတွင် အခွန်ကင်းလွတ်ပါသည်။
Binary Options ကိုနားလည်ခြင်း - အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ
Binary options များသည်ရှုပ်ထွေးသောဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများဖြစ်ပြီးအသစ်စက်စက်ကုန်သည်များကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ လက်တွေ့ကျကျ binary options ဥပမာများကိုကျွန်ုပ်တို့မဖွင့်မီသင်သတိထားရမည့်အဓိကဝေါဟာရများများစွာရှိသည်။
binary ရွေးချယ်မှုပွဲစားများ အမြဲတမ်းတာရှည် (သို့) တိုတိုသွားရန်ရွေးစရာကိုအမြဲပေးလိမ့်မယ်။ Layman ၏စည်းမျဉ်းများအရ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုသွားမည်ဟုသင်ထင်သောလမ်းကြောင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် FTSE 100 တွင် binary option ကိုကုန်သွယ်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါစို့။
အကယ်၍ သင်သည်ညွှန်းကိန်းအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိပါကရှည်လျားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရိုးရာရွေးချယ်စရာများနေရာ၌ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ် CFD နှင့် Forex trading လောကတွင် ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်
နောက်တစ်ခုက FTSE 100 မှာ bearish ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာ binary options စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားရင်ဈေးနိမ့်သွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းရလိမ့်မယ်။ ဤသည်ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်တွင်တစ် ဦး put option ကိုနေရာချခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းဝယ်ခြင်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
binary option များရှိသပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းသည်သင်သေချာစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည့်အရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယခင်ကရိုးရာရွေးချယ်မှုစာချုပ်များကိုယခင်ကကုန်သွယ်ခဲ့ဖူးပါက၊ binary options များနှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းသည့်အခါသပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ကိုသင်သိရလိမ့်မည်။ သတိမထားမိသောသူများအတွက်, သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းသည် binary options ကုန်သွယ်မှု၏ 'mid-point' ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သငျသညျသပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်။ , သင်ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ရှည်လျားသောသို့မဟုတ်တိုတောင်းချင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုကြပါစို့ Nike ၏အစုရှယ်ယာများကိုလက်ရှိတွင် ၇၅ ဒေါ်လာနှင့်ပွဲစားသည်ဒေါ်လာ ၈၀ ဖြင့်ရောင်းချနေသည်။ စာချုပ် binary option ကုန်ဆုံးချိန်တွင် Nike စတော့ရှယ်ယာများ၏ဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၈၀ ထက် ပို၍ စျေးနှုန်းကျလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်ရှည်လျားစွာသွားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဟုထင်ပါကသင်တိုတောင်းရန်လိုသည်။
များသောအားဖြင့် binary options ပွဲစားများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောသပိတ်မှောက်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်သင်နှစ်သက်သောအန္တရာယ်အဆင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Nike စတော့ရှယ်ယာအပေါ်အခြားရွေးချယ်စရာသပိတ်စျေးနှုန်းများ $ 85 နှင့် $ 90 မှာရပ်လိမ့်မည်။ သပိတ်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားလေလေအောင်မြင်မှုအတွက်ရှည်လျားသောအမိန့် (ပိုတိုသည့်အခါဗီဇာအပြန်အလှန်) တွင်သင်ပိုမိုရရှိလေလေဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာကုန်သွယ်မှုရဲ့အခွင့်အလမ်းနည်းသွားတာနဲ့အမျှပိုမိုမြင့်မားတဲ့ဆုကိုမျှော်လင့်သင့်တယ်။
ရိုးရာရွေးချယ်မှုစာချုပ်များနှင့်ဆင်တူသည်မှာ binary options သည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့နှင့်အချိန်အမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ binary option များအခြေချသည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး၊ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ binary options ပွဲစားများသည်များသောအားဖြင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ရက်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ဒီဟာကစက္ကန့် ၆၀ လောက်ပဲကြာနိုင်တယ်၊ တစ်နှစ်ပြည့်မယ်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအသုံးအနှုန်းတိုလေ၊ ထိရောက်မှုနည်းသောသုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်လာသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများသို့မဟုတ်အခြေခံသတင်းဖြစ်ရပ်များမရှိခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏အနာဂတ် ဦး တည်ချက်ကိုတစ်မိနစ်နှင့်တစ်မိနစ်အခြေခံတွက်ချက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်။ တကယ်တမ်းတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် (၄) နာရီထက်နည်းသောမည်သည့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချိန်ကာလကိုမဆိုရှားပါးသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်၏ binary options များ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲကုန်သွယ်မှုအပေါ်သင်၏ပြန်လာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စက္ကန့် ၆၀ တွင်သက်တမ်းကုန်သော binary options contract ၏စျေးနှုန်းကိုသင်မှန်းဆလျှင်သုံးလအတွင်းကုန်ဆုံးမည့် option နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြတ်ရရှိလိမ့်မည်။
လောင်းကြေးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခန့်မှန်းရန်ဆုံးဖြတ်သည့်ငွေပမာဏသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အခြေခံတန်ဖိုးနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အရေးကြီးသည်မှာပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၂၀၊ ဒေါ်လာ ၅၀၀ သို့မဟုတ်တစ်စည်၊ အောင်စတစ်ခုသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ဖြစ်သည် - သင် binary options broker မှချမှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်အတွင်းသင်ကြိုက်သလောက်များများစားစား၊
ဥပမာအားဖြင့်၊ မနက်ဖြန်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် binary options သက်တမ်းကုန်သွားလျှင် S&P 500 ၏သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်ပြီးအမှတ် ၃၀၀၀ ၏တန်ဖိုးကိုသင်ခန့်မှန်းလိုသည်ဟုဆိုပါစို့။ binary options များသည်ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်ပေးသည့်အခါသင်၏ကိုယ်ပိုင်လောင်းကြေးကိုထိရောက်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ binary options ပွဲစားများသည်အနိမ့်နှစ်ခုလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်ဟုဆိုလိုသည် နှင့် မြင့်မားသောလောင်းကြေးကုန်သည်များ။
✔️ Win ရာခိုင်နှုန်း
သင်၏အလားအလာရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုတွက်ချက်ရာတွင် binary options ပွဲစားများက၎င်းသည်အနိုင်ရရှိသူရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အကယ်၍ ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်လျှင်သင်၏လောင်းကြေးကိုပြန်ပေးသည့်နှုန်းကိုမြှောက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်ရွေးချယ်ထားသော binary options ကုန်သွယ်မှုသည် ၉၀% ပြန်ပေးဆပ်ပြီးဒေါ်လာ ၁၀၀ လောင်းသည်ဆိုပါစို့။ မှန်ကန်စွာခန့်မှန်းတွက်ချက်လျှင်အမြတ်အစွန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၉၀ (ဒေါ်လာ ၁၀၀ နှင့် ၉၀%) အနိုင်ရလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏မူလအစုရှယ်ယာဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုလည်းသင်စုစုပေါင်းပြန်အမ်းငွေဒေါ်လာ ၁၉၀ ကိုပြန်ယူလိမ့်မည်။
အမြတ်ရာခိုင်နှုန်း၏အရွယ်အစားသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ရလဒ်များ၏အလေးသာမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရသော်သင်သည်ရေနံစိမ်းရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ binary options များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည်ဟုဆိုပါစို့။ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်ရေနံတစ်စည်လျှင် ၂၅ ဒေါ်လာဖြင့်စျေးရှိသည်။ Binary Option ပွဲစားများသည်စုစုပေါင်းသပိတ်လေးခုပါ ၀ င်သည်။ နှစ်ခုတိုတောင်းလိုသူများအတွက် ၂ ခု၊
ရှည်လျားသောသွားရခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များအရသပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းမှဒေါ်လာ ၃၀ သို့မဟုတ် ၅၀ အထိသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ $ 30 သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သင်သာ 50% ၏ပြန်လာရာခိုင်နှုန်းရပေလိမ့်မည်။ ဒေါ်လာ ၅၀ ၏သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းသည် ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်အောင်မြင်လျှင် ၉၅% ပြန်အမ်းငွေရရှိလိမ့်မည်။ အခြားအဆုံးတွင်ရွေးစရာပွဲစားသည်စျေးတိုရန်ဆန္ဒရှိသူများအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀ နှင့် ၁၀ ဒေါ်လာကိုသပိတ်မှောက်ရန်စျေးနှုန်းကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဆိုပါအနိုင်ရရှိရာခိုင်နှုန်းအညီရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။
inary Long Binary Options ကုန်သွယ်မှု၏ဥပမာ
ဒါကြောင့်အခု binary options နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အဓိကဝေါဟာရတွေကိုသင်သိပြီဆိုလျှင်ကုန်သွယ်မှုသည်လက်တွေ့တွင်မည်ကဲ့သို့အလုပ်လုပ်မည်ကိုလက်တွေ့ကျသောဥပမာတစ်ခုအားကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင် IBM စတော့များကိုရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုပါစို့။
သင်သည် 24 နာရီသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် IBM စတော့ဒွိရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
IBM စတော့ရဲ့ လက်ရှိပေါက်ဈေးက $120 ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ခွင့်ပွဲစားသည် ကြာမြင့်စွာ သပိတ်ဈေး $124 သတ်မှတ်သည်။
အနိုင်ရရာခိုင်နှုန်းက 80% ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည် IBM တွင် စိတ်အားထက်သန်နေသည်ဟု ခံစားရသောကြောင့် သင်သည် $100 ဖြင့် အစုရှယ်ယာရှည်တစ်ခုကို မှာယူရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
24 နာရီအချိန်အတွင်း၊ binary options စာချုပ်သည် $127 စျေးနှုန်းဖြင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်။
သင်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ binary option သည် $124 ၏ hit price ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ပြီးဆုံးသောအခါ၊ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။
သင့်စုစုပေါင်းပြန်လာ $ 180 ၎င်းတွင်အမြတ်အစွန်းသည်ဒေါ်လာ ၈၀ (ဒေါ်လာ ၁၀၀ နှင့် ၈၀%) နှင့်သင်၏မူလဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် IBM ၏ binary option များသက်တမ်းကုန်သွားသောအခါ IBM ၏ရှယ်ယာများကိုဒေါ်လာ ၁၂၃ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဒီဟာက နည်းသော သင်ရရှိခဲ့သောသပိတ်မှောက်မှုသည်ဒေါ်လာ ၁၂၄ ထက်ကျော်။ ကုန်သွယ်မှုကိုသင်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားသည်သင်၏ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုသိမ်းလိမ့်မည်။
Short Short Binary Options Trade ၏ဥပမာ
binary options တိုကုန်သွယ်မှုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်နားလည်ရန်သေချာစေရန်ဥပမာကိုကြည့်ပါ။ သင်က Bitcoin စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ခံစားနေရသည်ဟုပြောမည်ဖြစ်ရာသင်တိုတောင်းရန်ရွေးချယ်သည်။
သင်သည် 1 ပတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် Bitcoin binary option ကိုရွေးချယ်သည်။
Bitcoin ၏လက်ရှိစျေးနှုန်းမှာ $6,500 ဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်ခွင့်ပွဲစားသည် တိုတောင်းသောသပိတ်စျေးနှုန်းကို $5,900 သတ်မှတ်သည်။
အနိုင်ရရာခိုင်နှုန်းက 95% ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည် Bitcoin တွင် အားနည်းနေသည်ဟု ခံစားရသောကြောင့် တိုတောင်းသော အမှာစာကို $500 ဖြင့် ထားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
48 နာရီအချိန်အတွင်း၊ binary options စာချုပ်သည် $5,850 စျေးနှုန်းဖြင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်။
သင်တိုတောင်းသွားသည်၊ နှင့် binary option သည် $5,900 ၏ hit price ထက်နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပြီးသောအခါ၊ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။
သင့်စုစုပေါင်းပြန်လာ $ 975 ၎င်းတွင်အမြတ်အစွန်းသည်ဒေါ်လာ ၈၀ (ဒေါ်လာ ၁၀၀ နှင့် ၈၀%) နှင့်သင်၏မူလဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။
အခြားရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့် Bitcoin binary option များသက်တမ်းကုန်သွားသောအခါ Bitcoin ကိုဒေါ်လာ ၅,၉၀၁ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ သင်သည်တစ်ဒေါ်လာသာကျသော်လည်းသင်ကုန်သွယ်မှုဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Bitcoin Option စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့အခါ Bitcoin စျေးဟာ $ 5,901 ရဲ့သပိတ်မှောက်စျေးထက်မြင့်မားလို့ပဲ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဒေါ်လာ ၅၀၀ လောင်းကြေးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
Binary Options ပွဲစားများတွင်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သနည်း။
ရိုးရာရွေးချယ်မှုပလက်ဖောင်းများနှင့်ဆင်တူသည်မှာ binary options ပွဲစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်အားရာနှင့်ချီ။ ခွင့်ပြုသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာ၏။ binary option များကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါသင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများအကြောင်းစိတ်ကူးတစ်ခုရရန်အောက်ပါစာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
စတော့ရှယ်ယာများ နှင့် ရှယ်ယာများ။
ငါ Binary Options ကုန်သွယ်ရေးအစောပိုင်းကုန်သွယ်ငွေရနိုင်သလား?
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Binary Optional ပွဲစားများသည်သင့်ကိုဤသို့ခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏အလောင်းအစား၏ရလဒ်ကိုမသိခင်ကန်ထရိုက်သက်တမ်းကုန်သွားသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်ဟာ Apple stock binary options contract ကိုရှည်လျားစွာလုပ်ခဲ့ဖူးသည်ဆိုပါစို့။ ၇ ဒေါ်လာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးဒေါ်လာ ၂၇၀ ဖြင့်သပိတ်မှောက်ခကိုသင်ယူခဲ့သည်။ ၅ ရက်မြောက်နေ့တွင်အက်ပဲလ်၏စတော့ခ်ငွေများရှိနေသော်လည်းသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုသင်မသိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ အက်ပဲလ်၏ဈေးနှုန်းသည် ၇ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၂၇၀ ထက်နည်းလျှင်ပိတ်လျှင်သင်လောင်းကြေးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် binary options space ၏သဘောသဘာဝသာဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်, binary options ပွဲစားအနည်းငယ်သည်ကုန်သွယ်မှုစောစောစီးစီးထွက်ရန်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်၊ သင့်ရဲ့မူလအစုရှယ်ယာထက်ပိုနည်းသွားနိုင်တဲ့“ ထွက်ငွေ” ဈေးနှုန်းကိုသင့်ကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ငွေထုတ်ပေးသောစျေးနှုန်းသည်သင်၏ငွေချေးခြင်းတွင်အဆုံးသတ်မည့်သင်၏ binary options အလောင်းအစားများ၏အချိန်နှင့်တပြေးညီပေါ်မူတည်သည်။
Binary Options ကို၏အားနည်းချက်များ
သင့်အနေဖြင့် binary option များကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်သင်၏နှလုံးသားကိုထားရှိခဲ့လျှင်တောင်အချို့သောအားသာချက်များကိုစဉ်းစားသင့်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏ binary option ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုမီအောက်ပါအချက်များကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
binary options ပွဲစားများအတွက်, နှစ်ခုသာအလားအလာရလဒ်များရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏သတ်မှတ်ထားသည့်အနိုင်ရရှိမှုရာခိုင်နှုန်းကိုအနိုင်ရသို့မဟုတ်သင်၏ရှယ်ယာများဆုံးရှုံးသွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကအနိုင်ရရှိနှုန်း ၈၀% ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကိုလောင်းမယ်ဆိုရင်အမြတ်အစွန်း ၈၀ ရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဆုံးရှုံးမယ်။ သင်အများစုအတွက်ဤအရာသည်လုံလောက်သော်လည်းသင်ပိုမိုအကျိုးများသည့်အချိန်တွင်သင်သည်ပျောက်ဆုံးနေနိုင်သည်ကိုသတိရရန်အရေးကြီးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်လာမယ့် ၇ ရက်အတွင်း GBP / USD ၏တိုးမြှင့်တန်ဖိုးအပေါ်သင်အလွန်ယုံကြည်မှုရှိသည်ဟုပြောကြပါစို့။
လွယ်ကူစွာထားနိုင်ရန်သပိတ်မှောက်မှုနှုန်းသည် ၁.၃၅ ဖြစ်သည်၊ သင်ဒေါ်လာ ၃၀၀ လောင်းပြီးအနိုင်ရရှိသူရာခိုင်နှုန်းသည် ၇၀% ဖြစ်သည်။
၇ ရက်အတွင်း GBP / USD ကို ၁.၄၀ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏လောင်းကြေးကိုနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၂၁၀ (ဒေါ်လာ ၃၀၀ x ၇၀%) ရရှိသည်။
ဤအရာသည် ကြီးမြတ်သကဲ့သို့၊ သင်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင်မည်မျှပြုလုပ်နိုင်မည်ဟု တွေးပါ။ ပျံ့နှံ့ လောင်းကစားပွဲစား? ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည် အမှတ်တစ်ခုလျှင် $1 နှင့် 1.35 နှင့် 1.40 အပိတ်စျေးနှုန်းအကြား ကွာခြားချက်မှာ အမှတ် 500 ဖြစ်ပါက သင်သည် $500 ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အမှတ်တစ်ခုလျှင် ရှယ်ယာကို $2 သို့ တိုးစေပြီး သင်သည် $1,000 ကို ကြည့်နေသည်။
တစ်နည်းပြောရလျှင် binary options သည်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုသတ်မှတ်ထားသောအနိုင်ရရာခိုင်နှုန်းသာကန့်သတ်ထားသည်။ ပြန့်ပွားသောလောင်းကစားခြင်း၊ CFD နှင့်ရိုးရာရွေးချယ်မှုပွဲစားများသည်အမြတ်အစွန်းများရရှိရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
များစွာသောအမှုများတွင် binary option များသည်ဥရောပရွေးချယ်မှုကန်ထရိုက်များကဲ့သို့များစွာအလုပ်လုပ်သည်။ Layman ၏အသုံးအနှုန်းများအရ၊ binary options သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်အချိန်နှင့်နေ့မတိုင်မီသင်ကုန်သွယ်မှုမှထွက်နိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ပြforနာဖြစ်နိုင်သည် - နှစ်ခုလုံးသည်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာသင်စာချုပ်များသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိသင်ရောက်ရှိနေချိန်တွင်သင်၏ binary options များကိုထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းကသပိတ်မှောက်တဲ့စျေးကိုဒေါ်လာ ၂၀၀ ပေးပြီးပြောတာဆိုပါစို့၊ ဒီပစ္စည်းကလက်ရှိဒေါ်လာ ၁၉၅ ဖြစ်တယ်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် ၂ ရက်သာလိုတော့သည့်အခါသင်အနိုင်ရရှိမှုရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းဖြင့်သင်၏အမြတ်ကိုရယူရန်သွေးဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ binary options ပွဲစားများကသင့်ကိုဤသို့ခွင့်ပြုခဲသည်။
ဒုတိယအချက်မှာအရေးအကြီးဆုံးမှာ binary options ပွဲစားများသည်စွန့်စားမှုလျော့ပါးစေရေးအတွက်များစွာကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်မင်းကရေနံတစ်စည်ကို ၂၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရှည်လျားစွာသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုပါစို့။ သင်စျေးကွက်များကသင့်ကိုဆန့်ကျင်ပါကသင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျော့ပါးစေရန်အလို့ငှာသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းတစ်ခုစတင်သောအခါ (stop per loss-order) သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ထွက်သွားပါလိမ့်မည် (တစ်စည်လျှင် ၂၇ ဒေါ်လာဆိုပါစို့) ။ သို့သော် binary option များကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်သင်လုပ်နိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ။
မအောင်မြင်သော binary options ကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးစေလိမ့်မည်ဟုသတိရရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ လောင်းကြေးနှင့်ရှယ်ယာများများကိုတိုတောင်းပြီးငွေကုန်သွားခြင်းမရှိပါကသင်၏ဒေါ်လာ ၂၀၀ လုံးဆုံးရှုံးမည်။
ရိုးရာအမေရိကန်ရွေးချယ်မှုများကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သည့်ကိစ္စတွင်လည်းအလားတူဖြစ်သော်လည်း၊ အကယ်၍ သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းကိုမချိုးဖောက်ပါကသင်၏ပရီမီယံကိုဆုံးရှုံးမည်ဆိုပါကအနည်းဆုံးသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုအနည်းငယ်အရှုံးဖြင့်ငွေထုတ်ယူနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ အရာရာဆုံးရှုံးရန်
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့် CFD ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် binary options ပွဲစားများကိုအကာအကွယ်ပေးထားသည်။ သင်၏သြဇာတစ်ခုလုံးကိုသင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းမှာသြဇာသက်ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုညသို့ရောက်သည်။ ဥပမာ CFDs မှတစ်ဆင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ IBM စတော့ရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူပြီး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကျသွားလျှင်သင်၏ရှယ်ယာ ၁၀% သာဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ binary option များကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါ၎င်းသည်ထိရောက်စွာ 'All-or-nothing' ရလဒ်ဖြစ်သည်။
Binary Options ပွဲစားများနှင့်အခွန်
သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ binary options များရောင်းဝယ်သောအခါအခွန်လွတ်အမြတ်မှအကျိုးရနိုင်သည်။ ဥပမာ - ပြန့်ပွားသည့်လောင်းကစားခြင်းနေရာများကဲ့သို့ပင်ယူကေမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Binary options tax မှကင်းလွတ်ခွင့်ရကြသည်။ အနည်းဆုံး HMRC သည်ကဏ္ the ကိုလောင်းကစားအဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် CFD သို့မဟုတ် Forex platform တွင်အရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောသင်၏အမြတ်အစွန်း၏ ၁၀၀% ကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တိုင်းတွင်ဤကိစ္စမျိုးမဖြစ်နိူင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်အားအရည်အချင်းပြည့်မီသောအခွန်စာရင်းကိုင်နှင့်အရင်ဆုံးပြောဆိုရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
Binary Options ပွဲစားများအတွက်အခကြေးငွေ
အခကြေးငွေနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်, binary options ပွဲစားအများစုကသင့်ကိုကော်မရှင်မပါဘဲကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်အခြားကုန်သည်များနှင့်မတူဘဲသင်နှင့်ပွဲစားနှင့်တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်က binary options ကုန်သွယ်မှုကိုဆုံးရှုံးသွားပါကပွဲစားသည်သင်ဆုံးရှုံးခဲ့သောအစုရှယ်ယာကိုဆက်လက်ထားရှိမည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် binary options များကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောအခါနောက်ခံအရင်းအမြစ်ကိုသင်မပိုင်သောကြောင့်ပွဲစားအတွက်သင့်ကိုယ်စားဘဏ္financialာရေးတူရိယာကိုအမှန်တကယ်ဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
binary options ပွဲစားများကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောအခကြေးငွေများမှာငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အကောင့်အားငွေမသွင်းဘဲရန်ပုံငွေပေးမည်ဟုမျှော်လင့်သော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ထိုနည်းတူစွာသင်သည်အနည်းဆုံးအပ်ငွေနှင့်ထုတ်ယူငွေပမာဏပမာဏကိုလည်းသင်အကဲဖြတ်သင့်သည်။
အကောင်းဆုံး Binary Options ပွဲစားများကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
အခု binary options sector ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသိပြီးပြီဆိုရင်သင်မည်သည့်ပွဲစားကိုအသုံးပြုချင်သည်ကိုစတင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ binary options ပွဲစားနှစ်ပွဲမှာမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် platform အသစ်တစ်ခုနှင့်စာရင်းဖွင့်ခြင်းမပြုမီအောက်ပါတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။
သင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ binary options ပွဲစားကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားမှုရှိ၊ မရှိဆိုတာဖြစ်သည်။ အချို့နေရာများသည် Wild West နှင့်ဆင်တူသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မည်သည့်စင်မြင့်ပေါ်တွင်သင်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် binary options ပွဲစားများကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အဓိကအနီရောင်အလံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ပွဲစားကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားရင်တောင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသူရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသင်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူကေအထက်ရှိ Marshall ကျွန်းများတွင် လိုင်စင်တစ်ခုအတွက် ပွဲစားတစ်ဦးရွေးချယ်သည်။ FCA or CySEC ဆိုက်ပရပ်စ်တွင် အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းများ မြည်သင့်သည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ binary options များပွဲစားကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်နေရာတွင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဘေးကင်းရေးတွင်အဓိကပြောဆိုနိုင်သည်။
ထို့နောက်သင်ပလက်ဖောင်းကမည်သည့်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုထောက်ပံ့သည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ binary options ပွဲစားသည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလက်လီရောင်းဝယ်သူများအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့်နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုအမျိုးမျိုးကိုသင်ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။
၎င်းတွင် ရိုးရာဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲမှု သို့မဟုတ် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်ကဲ့သို့သော အစဉ်အလာတစ်ခု ပါဝင်သင့်သည်။ PayPal က, Skrillဒါမှမဟုတ် Neteller. သင်ရွေးချယ်ထားသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတွင် မည်သည့်အခကြေးငွေများ သက်ရောက်သည်ကို စစ်ဆေးရန် မမေ့ပါနှင့် — နှင့် သင်ပြည့်မီရန် အနည်းဆုံးအကောင့်မည်မျှလိုအပ်သည်ကိုလည်း စစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့်။
d️ Tradable Binary Options များ
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုထောက်ပံ့သောထိန်းညှိထားသော binary options ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်များတွင်မရှိလျှင်စိတ်ပျက်သွားမည်။
သတင်းကောင်းမှာစာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီပွဲစားမှကမ်းလှမ်းသောမည်သည့် binary options ကိုသင်ပုံမှန်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ကုန်စည်များနှင့် cryptocurrencies အပါအ ၀ င်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအမျိုးမျိုးကိုပေးထားသည့်ပလက်ဖောင်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း binary options သည်အလွန်ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားသည်သင်ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာခံစားရသည်အထိအမှန်တကယ်အနိမ့်လောင်းကြေးများဖြင့်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
binary options ပွဲစားများကသင့်အားစာချုပ်တစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာသာပေးခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ ၁၀၀ တပ်ဆင်သည့်ပလက်ဖောင်းများကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် binary space ၏ high-roller များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်းအသစ်သောကုန်သည်များအတွက်မူ၎င်းသည်အလိုမရှိပါ။
✔️ Win ရာခိုင်နှုန်းနှုန်း
အနိုင်ရရာခိုင်နှုန်းနှုန်းထားများသည်မည်သို့ကမ်းလှမ်းသည်ကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ binary options space တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်သည်အမြင့်ဆုံး ၉၅% အနိုင်ရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အလောင်းအစားသည်အများဆုံးဒေါ်လာ ၉၅၀ ပေးချေနိုင်သည်။ သို့သော်အချို့သော binary options ပွဲစားများသည် ၇၀% မှ ၈၀% အတွင်းအနိမ့်ဆုံးအနိုင်ရနှုန်းကိုပေးလိမ့်မည်။
တစ်ခြားသောအဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀% ထက်ကျော်လွန်သောအနိုင်ရရှိမှုနှုန်းနှုန်းထားကိုကမ်းလှမ်းသော binary options ပွဲစားများကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ အနိုင်ရရှိမှုရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အလောင်းအစားလုပ်ငွေသည်ပိုက်ဆံလျော့သွားနိုင်သည်။
Str Strike နှုန်းများ၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း
အထက်ဖော်ပြပါအပိုင်းမှ ဦး ဆောင်သူသည်ပွဲစားမှကမ်းလှမ်းသောသပိတ်မှောက်မှုနှုန်း၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ သင်ကလက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၉ နှင့်ညီမျှသော Facebook ရှယ်ယာများ၌ binary options များရောင်းဝယ်နေကြသည်ဟုဆိုပါစို့။
တစ်ဦးချင်းပွဲစားနှစ်ဦးသည် အနိုင်ရရာခိုင်နှုန်း 80% ကိုပေးဆောင်သည်။
ပွဲစား A တွင် ရက်ရှည်သပိတ်စျေးနှုန်း $134 ရှိပြီး အတိုချုံးစျေးနှုန်း $124 ရှိသည်။
ပွဲစားခသည်ရှည်လျားသောသပိတ်မှောက်မှုဒေါ်လာ ၁၃၈ နှင့်တိုတောင်းသောသပိတ်မှောက်မှုဒေါ်လာ ၁၂၀ ရှိသည်။
ပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုသင်ထင်သလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကပွဲစားအေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကမင်းကအနိုင်ရရာခိုင်နှုန်း ၈၀% ကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် Broker B က Facebook ရှယ်ယာတွေက ၁၃၈ ဒေါ်လာအထိရှည်မယ်၊ သို့သော်ပွဲစား A သည် ၀ င်ငွေရရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၃၄ / ၁၂၄ ဒေါ်လာဖြင့်သပိတ်မှောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။
စက္ကန့်တိုသောသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်များနှင့်အတူ binary option များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရာတွင်သုတေသနကိရိယာများသည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသော်လည်း၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ၆ လသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့၌ binary options များရောင်းဝယ်ပါကနည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကိရိယာများကိုရယူလိုသည်။
binary options ပွဲစားသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းများကိုအခြေခံကျသောသတင်းများနှင့်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုတင်ပြပါကအသုံးဝင်လိမ့်မည်။ ပညာရေးအရကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်သွယ်မှုအသစ်များကိုလေ့လာသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော binary options ပွဲစားများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းတွင်အသုံးများသောဗီဒီယိုများနှင့်ဘလော့ဂ်များ၊ တစ်ဆင့်ချင်းလမ်းညွှန်များနှင့်ပုံမှန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပင်ပါဝင်သင့်သည်။
ထိပ်တန်းဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုပေးသောပွဲစားရွေးချယ်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ binary options များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၄/၇ တွင်ကုန်သွယ်သောကြောင့်ထောက်ပံ့သူများသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီပံ့ပိုးပေးသည့်ပွဲစားကိုသင်အသုံးပြုလိုသည်။ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း၊ အီးမေးလ်နှင့်တယ်လီဖုန်းအထောက်အပံ့ပုံစံဖြင့်လာသင့်သည်။
Binary Options Brokers: ဒီနေ့ဘယ်လိုစရမလဲ
အကယ်၍ သင်သည်သွေးခုန်နှုန်းကိုလက်ချောင်းဖြင့်ဖမ်းယူပြီး binary options ကိုကုန်သွယ်ရန်စတင်လိုပါကအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သင်လိုက်နာရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေများအပ်နှံခြင်းနှင့် binary options ကုန်သွယ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းတို့၏အဆုံးမှအဆုံးအထိလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၁ - သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး Binary Options ပွဲစားကိုရှာပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော binary options ပွဲစားကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိကအာရုံစိုက်ရမည့်အချက်များမှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်နှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
သင်၌ binary options ပွဲစားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာရန်အချိန်မရှိပါက ၂၀၂၀ ၏ထိပ်တန်းရွေးမှု ၃ ခုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေသို့ scroll လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုထားသော binary options ပွဲစားများသည်ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သဖြင့်သင်၏ပိုက်ဆံမှာသေချာသည်။ ခပ်သိမ်းသောကာလ၌ဘေးကင်းလုံခြုံ။
အဆင့် ၂ - Account ဖွင့်ပြီး Identity ကိုစစ်ဆေးပါ
အကယ်၍ သင်သည်ပုံမှန်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော binary options broker ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်သင်ယခု account တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကဲ့သို့သောအခြေခံအချက်အလက်အချို့လိုအပ်သည်။
ပွဲစားသည်ငွေခဝါချခြင်းတိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်သင့်အားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လည်းတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ Binary Optional ပွဲစားများသည်အစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID မိတ္တူတစ်ခုကို upload ပြုလုပ်၍ သင့်အားဤသို့ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏ ID ကိုတင်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်ငွေအချို့ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ရွေးစရာများတွင်ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ ခရက်ဒစ်ကတ်အီး - ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲများပါဝင်သင့်သည် ပွဲစား၏အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏကိုဖြည့်ဆည်းရန်သေချာပါသည်။
အဆင့် ၄: Binary Options Markets ကိုရှာပါ
သင်ရောင်းဝယ်လိုသော binary options market ကိုသင်ယခုရှာရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအမျိုးမျိုးကိုအထူးပြုသည့်အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုနေပါကထို site ၏ binary options section သို့သွားပါ။
တစ်ချိန်တည်းတွင်ပွဲစားမှထောက်ပံ့သောများစွာသောကွဲပြားခြားနားသော binary options စျေးကွက်ကိုလေ့လာပါ။ ၎င်းတွင်စတော့ရှယ်ယာများနှင့်ရှယ်ယာများ၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ညွှန်းကိန်းများ၊
အဆင့် ၅။ သင်၏ Binary Options ကုန်သွယ်မှုကိုနေရာချပါ
သင်၏ binary options ကုန်သွယ်မှုကိုယခုသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်ကအခြေခံတွေကိုအကဲဖြတ်ပြီးပြီ၊
သင်၏ရှယ်ယာထည့်ပါ။ လောင်းကြေးရှုံးရင် လောင်းကြေးတစ်ခုလုံး ဆုံးရှုံးမှာကို မမေ့ပါနဲ့။
သင်၏အမှာစာကိုလက်ခံပြီးသည်နှင့်သင်ဘဏ္financialာရေးစျေးကွက်၏ကံကြမ္မာကိုရောက်လိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်သင်၏အလောင်းအစားအောင်မြင်မှုရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန် binary options သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။
2022 ၏အကောင်းဆုံး Binary Options ပွဲစားများ - ကျွန်ုပ်တို့ထိပ်ဆုံးရွေးရန် ၃
အခုအချိန်မှာ binary options တွေကိုစတင်ရောင်းဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါသလား။ ဒါပေမယ့်ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့အချိန်မရှိဘူးလား။ အောက်တွင် ၂၀၂၀ ၏ထိပ်တန်း binary options ပွဲစားများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၁။ Crypto Trader– ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီး Crypto Trader နဲ့စပြီးချမ်းသာလာပါ!
Crypto Trader သည် Bitcoin ၏ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ကံစမ်းမဲများကိုစုဆောင်းမိလိုက်သောရူးသွပ်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်လူများအားသီးသန့်သီးသန့်သီးသန့်ထားသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်များသည်လတိုင်းလတိုင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌အပန်းဖြေအနားယူခြင်းကိုနှစ်သက်ကြပြီးတစ်နေ့လျှင်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာအလုပ် လုပ်၍ လက်ပ်တော့တွင်ငွေရှာနေကြသည်။
အကျဉ်းချုပ်အနေဖြင့်၊ binary options သည် button ကို click လုပ်ခြင်းဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖော်ပြထားသည့်သပိတ်မှောက်စျေးနှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်ပိုမိုနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာပိတ်ဖို့လိမ့်မယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်များသည်စက္ကန့် ၆၀ မျှသာဖြစ်ပြီးရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက်အထိကြာနိုင်သည်။
သို့သော်၊ binary options သည်လူတိုင်းအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့် အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သည်အမျိုးအစားဖြစ်လျှင်စွန့်စားမှုကိုရှောင်သောနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုရန်နှစ်သက်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင် binary options ကုန်သွယ်၏အသံလိုပဲပြုလျှင်, ဒီအထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအာကာသအလုပ်လုပ်ပုံကို၏အတွင်းနှင့်အပြင်ကိုရှင်းပြခဲ့ကြသည်။
သင်နှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်သင်ရွေးချယ်နိုင်ရန်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ၏ထိပ်တန်း binary options ပွဲစားသုံး ဦး ကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်။ နောက်ဆုံးတွင် binary option များရောင်းဝယ်မှု၏အန္တရာယ်များကိုသင်အပြည့်အဝနားလည်ထားရန်လိုအပ်သည်၊ သင်၏ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် အလောင်းအစားမအောင်မြင်လျှင်။
ရိုးရာရွေးချယ်မှုများနှင့် binary options များအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
သဘောသဘာဝနှင့်ဆင်တူသော်လည်း binary options သည်စာချုပ်သက်တမ်းမကုန်မီကုန်သွယ်မှုမှထွက်ခွာရန်ခဲယဉ်းပြီး၊ ထို့အပြင် binary options သည်သင့်အားသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကိုသာ ၀ င်ခွင့်ပြုသည်။
binary options ပွဲစားများအတွက်အနည်းဆုံးအပ်ငွေဘယ်လောက်လဲ။
Binary.com ကဲ့သို့သော Binary Opportunity ပွဲစားများကသင့်ကိုဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာသာသွင်းခွင့်ပြုသည်။ အခြားသူများသည်များစွာလိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီဤအရာကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ရွေးချယ်မှုကုန်သွယ်မှုတွင် 'သပိတ်စျေးနှုန်း' ကဘာလဲ။
သပိတ်မှောက်မှုစျေးနှုန်းသည်ကုန်သွယ်မှု၏အလယ်အလတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပြီးသင်အနိုင်ရရန်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်မည်သည့်စျေးနှုန်းလိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဥပမာ အကယ်၍ သပိတ်မှောက်မှုသည်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြစ်ပြီးသင်ရှည်လျားစွာသွားလိုပါကကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀.၀၁ သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောစျေးနှုန်းဖြင့်သာအဆုံးသတ်ပါကသင်လောင်းနိုင်သည်။
binary options ပွဲစားများကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားပါသလား။
ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ binary options ပွဲစားများကိုအများစုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်ပလက်ဖောင်းများစွာသည်တရား ၀ င်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲလည်ပတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ထိန်းညှိသောပွဲစားနှင့်အတူသာ sign up ကို။
binary options များသည်အမြတ်ခွန်ကင်းလွတ်သလား။
၎င်းသည်သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယူကေတွင် binary options အရောင်းအ ၀ ယ်ကို HMRC မှလောင်းကစားခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ထို့ကြောင့်အမြတ်သည်အခွန်လွတ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဤသည်မှာအခြားနေရာများတွင်မဖြစ်နိူင်သောကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်များရယူရန်သေချာပါစေ။
binary options ကန်ထရိုက်ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမှာလဲ။
Binary options သည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်မှစက္ကန့် ၆၀ မျှသာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်အထိဖြစ်သည်။
binary options များရောင်းဝယ်သောအခါသင်မည်မျှလုပ်နိုင်သနည်း။
Binary options ပွဲစားသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောစာချုပ်တွင် 'win percent rate' ကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်လျှင်သင်၏နှုန်းကိုသင်၏လောင်းကြေးဖြင့်မြှောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်နိုင်သည့်နှုန်းသည် ၈၀% ရှိပြီးသင် ၁၀ ဒေါ်လာလောင်းလျှင်အမြတ်တွင် ၈ ဒေါ်လာရလိမ့်မည်။